बा’लेनको च’र्चित च’स्मा : ब’जारमा उ’च्च मा’ग, क’ति प’र्छ मू’ल्य ? – Sudur Samaj
बा’लेनको च’र्चित च’स्मा : ब’जारमा उ’च्च मा’ग, क’ति प’र्छ मू’ल्य ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन) अहिले चर्चित पात्रका रूपमा देखिएका छन् । स्ट्रकचरल इन्जिनियर तथा चर्चित र्‍यापरको रूपमा परिचित बालेन काठमाडौं महानगरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि थप चर्चित बने । निर्वाचन हुनु अगावै उनलाई चर्चित हुनुमा उनको चस्माको भूमिका योगदान महत्वपूर्ण रह्यो ।
धेरैले उनको चस्माको तारिफ गरे भने अधिकांशले चस्माको आलोचना समेत गरे । तर, उनले ती सबै कुराहरूलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदारीको मैदानमा होमिए । अहिले उनले आफ्ना प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापित र गठबन्धनकी उम्मेदवार नेपाली काँग्रेसकी नेतृ सिर्जना सिंहलाई पछि पार्दै अगाडि बढिरहेका छन् ।
काठमाडौं न्यूरोडमा रहेकाे सुरज आर्केड होलसेल बजारमा कार्यरत व्यापारी सुरेश खड्गी बालेनको जस्तै चस्मा चाहियो भनेर आउने ग्राहकको संख्या पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको बताउँछन् । चस्माको माग बढेकै कारण स्टक पनि अभाव भएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार याे चस्मा बजारमा पहिला नै आइसकेको भएपनि बालेनको उम्मेदवारीपछि यसको चर्चा बढेकोले माग अत्याधिक बढेको हाे ।
‘यो चस्मालाई मेटल ग्लास भनिन्छ, तर, उहाँ (बाेलन)ले लगाएको चस्मा चर्चित भएपछि सबैले बालेन ग्लास नै भन्छन्, अहिले नाम नै ‘बालेन चस्मा’ भएको छ,’ उनले भने । ती व्यापारीका अनुसार यो चस्माको मूल्य भने धेरै महँगो छैन । उनले सो चस्माको मूल्य ७ सय देखि ३ हजार २ सय रूपैयाँसम्म पर्ने बताए । जुन रातो, सेतो, कालो तथा गोल्डेन रङ्गमा पनि पाइने उनले बताए ।
सुनको भाउ फेरि ह’त्यै बढ्यो, यस्तो छ बजार मूल्य